Ururka Shabaab ayaa fagaaro ku yaallo Degmada Awdheegle ee Gobolka Shabeellaha hoose ku toogteen labo ruux – STAR FM SOMALIA
Ururka Shabaab ayaa fagaaro ku yaallo Degmada Awdheegle ee Gobolka Shabeellaha hoose, shalay galab waxa ay ku toogteen labo ruux oo ay ku eedeeyeen inay u kala shaqeynayeen Amisom iyo Nabad Suggida Somaliya.
Fagaaro ku yaallo Degmada Awdheegle ayaa la isugu yeeray Bulshada deegaanka, kuwaasi oo daawanaayay qaabka xukunka dilka ah uu u dhacay shalay.
Qaadiga Maxkamada Shabaabka ayaa madasha ka sheegay eedeymaha loo haysto raggaan iyo go’aanka ay maxkamada ka gaartay.
Ugu horeyn Qaadiga ayaa sheegay in Cabdi Eeney Deerow oo 33 sano jir ah lagu soo eedeeyay in ciidanka Amisom uu u qodi jiray Difaacyada, markii su’aashaasi la weydiiyayna maxkamada horteeda uu ka muujiyay qiraal ku saabsan inuu qaban jiray howshaasi, waxaana maxkamada Shabaabka ay ku xukuntay xukun dil toogasho ah.
Sidoo kale Maxkamada ayaa xukuntay Asad Mayoow Xaaji Cismaan oo 20 sano jir ah, waxaa lagu eedeeyay Asad inuu la shaqeynaayay ciidanka Nabad Suggida Somaliya, Gobolkana loo soo diray, maxkamada horteedana uu ka qirtay arintaasi, kadibna maxkamada waxa ay ku xukuntay dil toogasho.
Hadaladaasi waxaa goobta toogashada ay ka dhaceysay ka sheegay Qaadiga Maxkamada Shabaabka ee Degmada Awdheegle, inkastoo aysan jirin Dad difaacayay eedeysanayaasha, maadaama xukunada Shabaabka ay yihiin hal dhinac oo midkooda un uu socdo.
Rag u diyaarsan toogashada labadan nin ee dhalinyarada ayaa durba rasaas ku boobay labadii nin oo ku xirnaa tiir, xilli dilayaasha ay ku dhawaaqayeen ALLAHU AKBAR.
Ma’ahan markii ugu horeysay oo Shabaabka ay fuliyaan xukunada dilalka ah ee ay ku fuliyaan dadka lagu soo eedeeyay inay Dowladda iyo Amisom la shaqeeyaan.